Roma sy ny tantaran'ny Firenentsika faramparany | Hevitra MPANOHARIANA
2012-12-11 @ 11:30 in Politika Dia iarahan'ny besinimaro mahita ankehitriny ny fitokanana ny "Coliseum de Madagascar" izay mbola andrasana ny ho anarany amin'ny teny malagasy. Manahy anefa aho fa tsy ho tonga izany anarany amin'ny teny Malagasy izany. Koa na dia zava-bita eto Madagasikara aza ny toerana ho fialamboly sy ho fanalan'andron'ny besinimaro dia ho toy ny zava-bahiny letrezana eto an-tanindrazana ihany rehefa tsy hisy fametrahana eny amin'ny rindrina ny anarany amin'ny teny malagasy tahaka izay ahitana azy amin'ny teny vahiny. Raha mijery habaka aterineto vitsivitsy anefa isika dia mety ho gaga fa ny Coliseum na ny Colisée tany Roma [fr] dia tsy izany no anarany tamin'ny voalohany fa Amphitheatrum Flavium [en]. Nahazo ny anarana Colosseum na Coliseum na Colosseo izy noho ny tsangambato goavan'i Nerona Kaisara teo akaiky araka ny nambaran'ny mpahay azy any ambadika any ihany. Ny tsikaritra voalohany dia fiarahan'ny teny Latina sy ny teny Frantsay ny anaran'ilay toerana etsy Antsonjobe.
Dia mbola avy indray ny heverina ho mifanentana amin'ny Circus Maximus [en] eto Antananarivo. Ambohipihaonana ara-panatanjahantena, mifandraindraika amin'izany ihany koa ilay anarana ho an'ny Malagasy. Hotokanana amin'ny faran'ny herinandro ihany koa manko ny Kianjan'ny Makis. Toa kisendrasendra nefa tena mahavariana ilay fifanaikaikezana anarana Maximus sy Makis. Satria ny hazakaza-tsoavaly no nalaza tamin'ny andro fahagola nampalaza ny Romana fa ny Rugby kosa no malaza mahavory olona kokoa eto Antananarivo amin'ny ankapobeny rehefa leon'ny mijery baolina fandaka ny mpanaraka izany teo aloha, tsy